Hevitra MPANOHARIANA | Oktobra 2021 |
2021-10-17 @ 21:31 in Ankapobeny
Manoratra etoana aho, tsy tiako ny hanoratana azy ity any amin'ny tambajotra sosialy fa ny ho tahiry amin'ny zavatra hitranga rahatrizay no antony ametrahana azy eto. Rehefa hisy ny adihevitra dia any no ilazana azy fa raha any amin'ny tambajotra sosialy any ho very anjavony vetivety satria izay manaraka politika ihany no mety hamaky fa ny hafa tsy hiraharaha.
Tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2018 aho dia gaga mahita ireto olona avy amin'ny fokontany sy kaominina mifanila amin'ny anay. Misesisesy ry zareo manao fôtôkôkia ny kara-panondrony. Dia nisy ny nanontaniana fa tsy namaly mazava fa hoe misy ilaina azy fotsiny. Nisy ihany anefa ny nilaza ny antony ary niangavy mba tsy holazalazaina loatra, na dia mahafantatra aza ilay olona fa mpanohana an-dRavalomanana aho sady misy afisin-dRavalomanana rahateo ny varotro. Misoratra anarana ao amin'ny filohan'ny Mapar ao amin'ny fokotanin-dry zareo ry zareo fa handrotsa-bato ho an-dRajoelina ary dia omena valisoa ihany koa avy eo.
Nandalo tao amiko ihany koa io filohan'ny Mapar io fa ny mba hahazoan'ny fokontaniny tombondahiny no antony voalohany nanentanany ny mponina ao aminy hifidy Rajoelina. Voalohany amin'izany ny fangatahana hanorina tetezana iray tena ilain-dry zareo. Angamba nahare ny fisisihanay nanontany ny antony hanaovana fôtôkôpia no nahatonga azy nandalo. Efa mpanentana hatramin'ny andron-dRatsiraka izany olona izany.
Rehefa nandeha ny fifidianana ary dia nandresy be tao mihitsy Rajoelina, ary raha ny kaominina Ambohimanga Rova nisy azy aza dia tena nitarika lavitra Rajoelina. Azo heverina fa mety hisy fitoviana amin'ilay fokontany nolazaiko ireo fokontany telo hafa mifanila aminay izay avy ao amin'ny kaominina io.
Ny kaominina Anosy Avaratra misy anay izay mifanila aminy anefa dia Ravalomanana ihany no nitarika na dia niha-ety kokoa aza ny elanelam-bato satria ny ilany andrefana amin'ny fokontaninay dia nifanintsana ny isa azon-dRajoelina sy Ravalomanana (mba tsy ilazako hoe saika nitarika ry zareo). Nanana mpanentana na mpitarika olona matanjaka maromaro ry zareo amin'io faritra io. Ny faritra hafa amin'ny fokontany anefa dia mitovy amin'ny salanisam-baton'Antananarivo renivohitra ny salan'isan'ny roa tonta. Raha ireto mpanentana iray fokontany amiko ireto dia heveriko fa tsy hampandalo ao amiko mihitsy ny hanaovana fôtôkôpia tahaka ity amin'ny fokontany nolazaiko ity satria heveriny fa mety ho sahiko ny hamaky bantsila am-bava ny zavatra hitako. Tadidiko tsara fa nisy namboly korontana tao ivelan'ny biraom-pifidianana minitra iray monja talohan'ny fanisam-bato saingy efa voafehin'ny filohan'ny biraom-pifidianana mialoha ny zavatra azo natao sy tsy azo natao mandritra ny fanisam-bato ka dia tsy nisy ny fikorontanana tanaty birao na dia nifanaritaka aza ny tao ivelany tao.
Fa inona moa no antony nanoratako izany zavatra lava dia lava izany?
Amin'izao fotoana izao dia nahazo tosika fameno dimy alina ariary (50.000Ar) mandritra ny dimy volana avokoa tsy nisy adino ireo olona nandefa ny fôtôkôpian'ny karapanondrony tao amin'ilay fokontany notantaraiko. Dia nolazain'ilay nitantara ihany koa fa tsy misy misitraka na iray aza ny avy amin'ny fokontany misy anay satria Ravalomanana no nandresy taty aminay. Izany hoe raha toa ka nisy (tsy fantatro na nisy na tsy nisy) ny fomba fiasa mitovy tamin'ny nataon'ity fokontany ity tamin'ny fokontany nisy anay dia tsy mahazo na inona na inona ry zareo satria resy teto amin'ny fokontany misy anay (tsy hay ihany koa ny kaominina!) ry zareo.
Dia lasa ny saiko, ary raha toy izany avokoa moa amin'ireo faritra sy fokontany rehetra eto Madagasikara ny zavatra mitranga dia ahoana? Voararan'ny lalàna ve ny zavatra toa izany? Efa tsinjon'ny lalàna ve izany? Mariho mazava tsara fa tsy sisi-bola any ambadika no nanomezana vola ireo olona ireo fa ambara tsara hoe "tosika fameno" avy amin'ny fanjakana.
Ka raha izany no zavamisy sy tsikaritra dia hohelohina ve ireo nahazo tosika fameno ireo raha mbola handrotsa-bato ho an-dRajoelina amin'ny fifidianana ho avy? Nahazo vola avy amin'ny fanjakana ry zareo fa tsy hoe avy amin'ny Mapar, nahazo mivantana izy fa tsy hoe tombontsoa iraisan'ny besinimaro. Ho mora ve ny handresy lahatra olona nisitraka zavatra toy izao manerana an'i Madagasikara? Mazava amin'izao fa misy antony tsara matoa dradradradraina ho toy ny asa goavana ny fitokanana lalana iray tsy ampy roa kilaometatra vita tsara mba entina ilazana fa nahavita be teto amin'ny firenena izy ary nisy niditra ihany koa tany am-bilany.
Asa raha takatrareo ny tiako lazaina fa efa mipetrapetraka tsara ny lamina hampandresy azy indray amin'ny fifidianana manaraka fa anjaran'ny tsirairay ny mihevitra sy mikaroka fomba fampandresena hafa mifaninana amin'izany sady mahatonga ahy hanao ilay lohateny hoe: "tsy ho mora mihitsy ny handresy an-dRajoelina"